» Ilkaxafan: Burcad badeeda Somalida waxaa lagu Maxkamadeynaya gudaha dalka
Qasaaraha ka dhashay Qarax ka dhacay Jowhar
Howlgalada Gaarisa oo saameeyay Suuqyada magaalada
Howlgalka Baledweyne oo lagu raadinayo maandooriyaha iyo dadka isticmaala
Gudi loo xilsaaray Jubooyinka oo ka hadlay halka wax u marayaan
Ilkaxafan: Burcad badeeda Somalida waxaa lagu Maxkamadeynaya gudaha dalka
December 12, 2012 - Written by Muqdisho - Edited bymaamule ShareGuddoomiyaha Maxkamada sare ee dalka ayaa daboolka ka rogay in Burcad badeeda Soomaalid lagu maxkamadeynayo dalka Soomaaliya.
Caydiid C/laahi Ilkaxaraf ayaa warkan ka sheegay Munaasabad lagu soo xirayay tababar loo fidinayay ku dhawaad 90 xeer ilaaliye waxaana uu sheegay in burcad badeeda la qabto loo baahan yahay in loo soo gacan galiyo dowladda Soomaaliya si loogu maxkamadeeyo Soomaaliya.
Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee Soomaaliya Ilkoxanaf ayaa ka dalabaday dowladdaha Ciidamadu ka joogaan xeebaha Soomaaliya in burcad badeeda aysan dalalkooda u qaadan ee taa badalkeeda ay ku soo wareejiyaan Soomaaliya.
Ikaxanaf ayaa hoosta ka xariiqay in ay awood u leeyihiin Maxkamadeynta burcad badeeda Soomaalida ee lagu qabto iyagoo isku dayay in ay afduubtaan Maraakiib ama qafaasha Maraakiib shisheeye.
Hadalka Guddoomiyaha Maxkamada sare ee dalka ayaa imaanaya xilli golaha Ammaanka fadhi ay ka yeesheen Arrimaha burcad badeeda ay sheegeen in loo baahan yahay in dal kasta uu sharciyadiisa ku xoojiyo Maxkamadeynta Burcad badeeda.
One Response to Ilkaxafan: Burcad badeeda Somalida waxaa lagu Maxkamadeynaya gudaha dalka
Somali jecel says:	December 12, 2012 at 20:07	Asc waad ku suubisen gaalada xeebahena jogta thanks
Booliska somaliland oo soo saaray digniino dhinaca amaanka ahMay 17, 2013
Cabdi Qeybdiid oo fariin u diray shacabka JubooyinkaMay 17, 2013
ciidamada dowladda oo la mideynayoMay 17, 2013
KISMAAYO NASIIB DARANAA, ANAA LEH IYO ANAA TAABSADAY BADANAA, QABIILO ISKU BAHEYSTA HADBA BADANAA “WARBIXIN”May 17, 2013